Ahoana ny fomba hanaovana bokotra HTML iray mahomby sy miasa | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hanaovana bokotra HTML iray mahomby sy miasa
Indraindray, rehefa mamolavola tranokala, mahafantatra ny fomba fanaovana a Bokotra HTML manampy anao betsaka izany. Indrindra fa afaka mamorona endrika izay mandeha sy lamaody ianao, tsy azo atao ny manery azy io ary mahazo valiny tianao indrindra amin'ny tranonkalanao.
Ankoatra ny zava-misy fa tsy lamaody intsony ny rafitra HTML, ny marina dia amin'ny fandaharana dia tsy maintsy fantatrao izany mba hamoronana rohy mankany amin'ny bokotra HTML izay mety indrindra amin'ny tranokala, bilaogy ary na dia ho an'ny pejin'ny marikao aza. Fa fantatrao ve ny fomba fanaovana bokotra HTML miasa sy kanto? Lazainay anao ny fomba hanaovana izany.
1 Dingana ahafahana mamorona bokotra HTML
1.1 Mamorona ny rafitra fototra
1.2 Manampia toetra mampiavaka ny bokotra
1.3 Omeo loko, habe ...
2 The tag BUTTON amin'ny HTML
2.1 Toetoetra marika BUTTON
3 Ahoana ny fomba hamoronana bokotra HTML an-tserasera
3.1 Mpanjaka Button Maker
3.2 Orinasa fanaovana bokotra Da
3.3 Generator bokotra Call to Action
3.5 Mpanao bokotra
3.7 Generator bokotra sary hover effet
Dingana ahafahana mamorona bokotra HTML
Tianay ny manampy anao amin'ny tranokalanao, bilaogy ... ary noho izany ny iray amin'ireo fahalalana tokony hanananao ary mora koa ny mianatra ny kaody HTML. Io dia ahafahanao manova zavatra be dia be amin'ny famolavolana ny pejinao. Ny iray amin'ireo singa ifotony dia ny bokotra, satria misy ifandraisany amin'ny rohy hitondrana ny mpampiasa any amin'ny toeran-kafa ao amin'ny pejinao na ivelan'izy ireo. Fa hainao ve ny manao azy?
Ireto misy dingana lehibe:
Mamorona ny rafitra fototra
Todo Ny bokotra HTML dia manana rafitra mitovy. Izy io dia voaforon'ny kaody izay hitovy foana, fa miova raha ny amin'izay tianao apetraka na ampifandraisina. Ny iray dia:
Ankehitriny, io dia hahatratra fotsiny fa manana rohy isika, tsy misy bebe kokoa, fa tsy ho hita amin'ny famolavolana bokotra (raha tsy manana endrika ianao ary ny iray amin'izy ireo dia ny famoronana bokotra).
Ahoana ny fomba hanaovana azy ho toy izao? Hilaza aminao izahay.
Manampia toetra mampiavaka ny bokotra
Mba hahafahan'ny bokotra HTML miasa sy mahasarika ny maso dia tsy maintsy miendrika bokotra izany. Noho izany, rehefa mamorona azy ianao dia mila mitadidy an'izany ny singa sasany dia hohamboarina. Araka izany, io kaody voalohany io, izay efa namboarina, dia toa izao:
Omeo loko, habe ...
Ary farany, amin'ny kaody mitovy dia azonao atao koa ny manisy tsipika (style) mba hamaritana ny haben'ny bokotra, ny endri-tsoratra, ny lokon'ny bokotra raha tsy mandalo ny totozy ianao ary mandalo azy, sns.
The tag BUTTON amin'ny HTML
Raha ny fanirianao dia ny mamorona bokotra namboarina manokana, dia ny mampiasa an'io marika io izay tianao, na dia manana tombony maro aza izy io dia misy fatiantoka ihany koa. Fa amin'ny ankapobeny dia afaka manompo anao amin'ny fampiasana fototra sy am-boalohany izy io.
Ny tag bokotra, toy ny mahazatra ao amin'ny kaody HTML, dia misy fisokafana sy fanidiana. Izany hoe, ny fisokafany dia mandritra ny fanidiana azy . Anisan'izany ny fampidirana ny fampahalalana rehetra an'io bokotra io. Ny tombony an'io noho ilay iray hafa hitanay dia ity bokotra ity dia mamela anao tsy hametraka rohy fotsiny, fa betsaka kokoa, toy ny sary, sahisahy, tapaka tsipika ... raha fintinina, izay ilainao rehetra.
Toetoetra marika BUTTON
Inona avy ireo toetra azontsika apetraka amin'ny bokotra? Eny, manokana:
Anarana: no anarana ahafahantsika manome ny bokotra. Amin'izany no ahalalana ny bokotra, indrindra rehefa manana maromaro ianao.
Soraty: sokafy ny bokotra nataonao. Raha ny marina dia afaka mamorona karazana bokotra maro ianao, manomboka amin'ny bokotra mahazatra ka hatramin'ny bokotra iray mba hamerenana endrika endrika iray, handefasana data, sns.
Sarany: mifandraika amin'ilay voalaza etsy ambony, ampiasaina hanondroana ny sandan'ny bokotra io.
Sembana: raha mijery azy ianao dia hataonao tsy mandeha ny bokotra, ka tsy mandeha izy.
Ahoana ny fomba hamoronana bokotra HTML an-tserasera
Raha tsy te-hanapaka ny lohanao ianao rehefa mamorona bokotra HTML ary aleonao mitady fanampiana amin'ny alàlan'ny tranokala amin'ny Internet izay manao ny bokotra ho anao, na farafaharatsiny mamela anao hahazo ny kaody handika azy amin'ny bilaoginao, tranokala na amin'ny toerana tianao dia misy safidy. Ary misy tranokala marobe izay hanampy anao, na amin'ny alàlan'ny fahazoana bokotra ifotony kokoa na tsotra iray tsotra kokoa.
Amin'izy ireo dia manolo-kevitra izahay:
Mpanjaka Button Maker
Tena mandroso izy io, indrindra satria mandao anao izy ovay ny bokotra rehetra amin'ny bokotra. Ho fanampin'izay, manome anao topi-maso izy mba hahitanao ny endriny ary azonao atao ny manamboatra ny zava-drehetra miankina amin'ny toerana ampidirinao ny bokotra.
Amin'ny farany, rehefa tsindrio ny bokotra Grab the code dia hiseho ny kaody HTML ary koa ny CSS. Aza adino ny mampiraikitra roa satria hanampy anao hitazona ny endrika nangatahinao io.
Orinasa fanaovana bokotra Da
Ity dia iray amin'ireo tranokala tsara indrindra amin'ny famoronana bokotra HTML, indrindra raha "antso hihetsika" no tanjonao. Mba hanaovana izany dia azonao atao ampanjifaina ny fitantaran'ny bokotra, ny endriny, ny endriny, ny alokaloka, ny habeny ary ny faritra hafa amin'ilay bokotra.
Avy eo dia mamela anao hisintona ny bokotra ho sary PNG, fa azonao atao koa ny mampiditra azy ao amin'ny tranonkalanao.
Generator bokotra Call to Action
Eto dia manome safidy roa fotsiny ianao, na sintomy ho PNG na amin'ny CSS. Manana tombony ny ahafahanao manamboatra ny loko ambadika, ny bokotra bokotra miaraka amin'ny endritsoratra sy ny lokony, ary koa ny fetra, ny habeny ary ny lokon'ny antsipiriany hafa.
Ity fitaovana ity dia iray amin'ireo feno indrindra azonao ampiasaina. Afaka mampiasa azy io maimaim-poana ianao dia hahazo endrika tsara, ary koa ny maoderina.
Ity fitaovana ity koa dia iray amin'ireo ahafahanao manamboatra ny bokotra, indrindra ny faritra manodidina ny sisiny, ny aloka, raha afovoany, voamarina sns ny soratra.
Raha mitady hamorona bokotra misy tsipika maromaro ianao, ity fitaovana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra. Tsy vitan'ny hoe manana fomba maro hanamboarana ny bokotra izy, fa azonao atao koa ny manamboatra bokotra lehibe kokoa na kanto kokoa.
Generator bokotra sary hover effet
Ity fitaovana ity dia ahafahanao mamorona bokotra izay, rehefa manidina ambonin'izy ireo ianao dia miova. Ho fanampin'izany, mamela anao hanana kaody HTML hahafahana mampiasa azy io, na dia tsy maintsy mampakatra ny bokotra farany an'ny valim-panontaniana ianao aza dia hitanao tamin'ny teo aloha.
Raha ny fanaovana bokotra HTML, ny tolo-kevitra tsara indrindra azonay omena anao dia izany manandrama safidy maromaro Hatramin'izany fomba izany dia hahatratra ny vokatra antenainao ianao. Aza mijanona amin'ny zavatra asehonao voalohany fotsiny, fa ny manavao na mandany fotoana bebe kokoa dia hanampy anao hanana endrika tsara kokoa. Efa nanao ny iray amin'ireo bokotra ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » HTML » Ahoana ny fomba hanaovana bokotra HTML iray mahomby sy miasa
Ahoana ny fanaovana karatra ara-barotra amin'ny Word